Humwe hukama | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Dzimwe hukama
chisarudzo Ndeipi iyo inonyanya kukosha yekutsvakurudza vanhu?
hurukuro. Ndeipi nhaurwa yetsvagurudzo yezvematongerwo enyika inoita senge yakakosha kwauri? "Enda kune mukadzi kana kuti usagare sei uine bhuku muruoko" - yakawanda yekutsvaga :) Ndeupi musoro wenyaya iwe? Nyore: 1) dambudziko reinterethnic uye ...
Ndeapi maruva akaita mukomana anokwanisa kupa musikana musi wekuzvarwa?
Ndeapi maruva ayo mukomana anogona kupa musikana pazuva rake rekuzvarwa? tsvuku rudo yero pfungwa chena unyoro macation maruva echirume, chero imwe (maruva, tulips) Tsvuku maruva echokwadi, rudo! Maruva ese anoratidza kudziya, ...
* Ini zvakaoma kuwana, zviri nyore kurasikirwa uye ... zvisingaite kukanganwa ... * .... iwe pachako unoti kudini pane izvi? Ini handisi kunyora nezvangu
* Ini zvakaoma kuwana, zviri nyore kurasikirwa uye ... zvisingaite kukanganwa ... * .... iwe unoti kudini kune izvi? Handisi kunyora nezvangu. Shcha ... rangarira ... Vakaroorana ipapo ini handikwanise kuva wekutanga ...
Bvunzo "Unokwanisa here kuuraya munhu?"
Bvunzo "Unokwanisa here kuuraya munhu?" ...
Nzira yekunyatsokodzera sei kufanana kwerudo rwekare rwekuzvarwa. Pausina kupa chikonzero chokunyadziswa?
Maitiro ekukwazisa zvakakwana rudo rwako rwekare pazuva rako rekuzvarwa. Kunyangwe isiri kupa chiratidzo chekunyadziswa? paunenge uchienda, siya uye usatandara semarara ari mugomba rechando. Korokodza zuva rinotevera. pa…
Ndinonyora sei kune mukomana wandinoda iye? Zvimwe zvepakutanga
Maitiro ekunyorera mukomana kuti ndinomuda? Meseji iri mumibvunzo yakatumirwa zvimwe zvepakutanga. 100% garandi ... ini ndinopa chiuru chinotapira kutsvoda, Zvinyoro nyoro, ndiri kukutsvaga. Muviri unopisa musimba rerudo, Passion inodya ...
Nzira yekuve yakakurumbira sei? Mazano kune vechidiki
Kubwinya, mukurumbira - sei kuzviita? Vasikana vanozivikanwa nemazita uye kumeso vakasiyana sei newe? Muchokwadi, mukurumbira hachisi chishamiso zvachose, asi mhedzisiro yezviito zvakapusa. ...
Ichokwadi, kana munhu ari mumhino akasvetuka pimple, zvino mumwe munhu ane rudo naye?
asi kana mburwa ikasvetuka mumhino dzemunhu, ipapo mumwe munhu akamuda? Kwete, rinongova jee, kuseka kwevanhu Kuonekwa kwecne kumeso, kusanganisira nemhino ...
Chii chinotarisa kuchenjerera? chii iye? nzira yekutsanangura nayo? Chii chakanaka kana chakaipa mairi?
Zvinorevei kunzwisisa? akaita sei? sei kuitsanangura? Chii chakanaka kana chakaipa paari? Duramazwi remutauro weRussia naSI Ozhegov anonzwisisa - anocherekedza, achiona zvakawanda, kufanoona, kufungidzira P. tarisa ...
Mutauro wechiRussia wakapfuma kupenga ... Ini ndoda kuverenga akawanda, akawanda mazwi anoreva zvakafanana ezwi rekuti "ZVAKANAKA"
Mutauro weRussia wakapfuma kupenga ... Ini ndoda kuverenga akawanda, akawanda mazwi akafanana ezwi rekuti "AKANAKA" Akanaka) akavimbika, zvine mutsindo, akanaka, anotonhorera. akanaka, akanaka, anonaka, akanaka, anoshamisa, anotyisa, anotyisa, akanaka, akanaka, akanaka! Mashoko anoreva tsime: ...
Pano ndine mubvunzo ... Zvakakwana ... Mari yakawandisa inodhura muMoscow? Shingai ... Zvakakubhadhara zvakadini?
Heino mubvunzo wangu ... Zvakakomba ... Muchato unoita marii paMoscow paavhareji? Mugove ... Zvakakupa marii? Verenga pano. Zvakanyatso kunyorwa http://marryme.ru/skolko-stoit-svadba-v-Moskve/ zvese kubva ku600-700 zvinodhura ...
Sei Kutamba Zvishoma Nezvishoma?
Nzira yekutamba inononoka-kufamba? zorora, unwe, uye utambe zvakanaka !!!! tarisa, iwe tora, iwe unoisa ruoko rumwe pachiuno chako, uye rwumwe pafudzi rako ... uye neupenzi stomp ... dzidzira pane vasikana vako izvozvi kana iwe uine izvo ...
Ndezvipi kurota iwe unogona kufarira munhu?
Ndeapi maroto aunoshuvira iwe kumunhu? Zviroto zvechiporofita))))) uyu mukana kwete chete wekuziva ramangwana rako, asiwo kuigadzirira, uye pamwe nekudzivirira njodzi iri kuuya. inotapira, inofadza, inodikanwa, yakanaka, ine mavara, ...
nzira yekuendesa mhumhi, mbudzi uye kabichi mhiri korwizi?
kutakura sei mhumhi, mbudzi uye kabichi kuyambuka rwizi? ikozvino imbwa yakawedzerwa kune iyo mamiriro. Ndivanaani maOlympiads aya? Siya mhumhi nekabichi :) tora mbudzi kutanga, uchisiya mhumhi ine kabichi. ...
Izvo zvakadini OBZH yakagadzirisa uye inorevei? Izvo zvinotungamirirwa neOlL uye zvakadzidzwa sei muchidzidzo chino?
OBZH inomiririra sei uye zvinorevei? OBZH inomiririra sei uye chii chinodzidziswa muchidzidzo chino? Nheyo dzeKachengeteka Hupenyu ... zvese ... chengetedzo, mitemo yemumigwagwa yevanofamba netsoka ...
Udza mumwe munhu vhesi nezve Lydia, ndapota !!! Tinoida nekukurumidza ...
Udza mumwe munhu vhesi nezve Lydia, ndapota !!! Tinoda nekukurumidza ... *** Pazuva reOrthodox zita-mazuva Tinoda kukorokotedza Lidochka, shamwari yemazuva edu akanakisa, Zvinonakidza kugara naye! Zviri nyore kutaura, ...
Nzira yekuwana nayo munhu munzanga. mitambo, kana paine mufananidzo wake chete?
Ungawana sei munhu munharaunda network, kana paine chete pikicha yake? hapana nzvimbo dzakakosha ... Kana kuisa VK ubvunze, kamwe-kamwe, ndiani anoziva ... Regai vabvunze kumativi. ... Kupi ...
Ndinogona Kuverenga Mari Pausiku ???
Zvinoita here kuverenga mari husiku ??? Mari inogona kuverengerwa pese paunoda, dai yaive. Unogona kuverenga chero nguva. asi iwe unogona kubhadhara zvikwereti chete kusvikira 18-00 ;-) Folk omens ...
Ndakatumidzwa munhu anorphous. Iyi ndiyo nzira yekuzvinzwisisa? Izwi ripi iro iri?
Vakandidana kuti munhu amorphous. Unganzwisisa sei izvi? ishoko rakaita sei? punch kumeso kweiyo))) Shamwari, vakudaidza iwe Chisikwa chinonyanya kushamisa. Hutachiona !!!! Amorphous munhu asina kusimba-anoda ...
Ndezvipi zvingareva zvirwere pamusoro pemunhu ???
Mashoko-maparasita angati chii nezvemunhu ??? mazwi-zvipembenene zviri mudikisoni yemunhu wese. Just do not need to confuse them with an blumbing words inotaura zvishoma nezve kushomeka kwepfungwa dzake ndingave nani kwavari ...
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,452 masekondi.